Tag: Hillary | Sagal Radio Services
Hillary Clinton oo ku eedeysay guuldaradii ka soo gaartay doorashada Agaasimaha FBI-da
Sagal Radio Services • News Report • November 13, 2016
Hillary Clinton ayaa ku eedeysay guuldaradii ka soo gaartay doorashada Agaasimaha FBI-da James Comey, kaasoo shaaciyay maalmo ka hor xilliga doorashada inuu dib u furayo baaritaanka ku aadan emailada ay isticmaali jirtay Ms Clinton, xilligii ay aheyd Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka.
Trump iyo Hillary oo ku guda jira ololahooda ugu dambeeyay ee doorashada
Sagal Radio Services • News Report • November 2, 2016
Iyadoo lix maalmood ay ka harsan tahay waqtiga lagu wado in dadweynaha Mareykanka u dareeraan doorashada Madaxweynaha bedelaya Barack Obama ayaa waxaa Musharaxiinta Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga ay ku guda jiraan ololahooda u dambeeyay.
FBI-da oo baaritaan labaad ku haysa Hillary Clinton
Sagal Radio Services • News Report • October 29, 2016
Agaasimaha hay’adda dambi baadhista Maraykanka ee FBI-da, James Comey, ayaa sheegay in hay’addu dib u furayso baadhitaankii ay ku haysay emaillada Hillary Clinton, waxaana uu sheegay in baadhayaashu heleen emaillo cusub.
Ololaha Hillary Clinton ee dhinaca Internet-ka oo la jabsaday
Sagal Radio Services • News Report • July 31, 2016
Ololaha doorashada Madaxweynenimada ee Hillary Clinton ayaa loo dhacay, kadib markii la sheegay in lagu soo qaaday weerar xaga Internet-ka.
Hillary Clinton oo weerartay Trump
Sagal Radio Services • News Report • July 29, 2016
Hillary Clinton ayaa weerar afka ah mar kale ku qaaday murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump.
Hillary Clinton: ‘’Soomaalida Mareykanka waxay safka hore kaga jiraan la dagaalanka Argagaxisada’’
Sagal Radio Services • News Report • January 27, 2016
Musharaxa madaxtinimada dalka Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa sheegtay in Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ay furumaha hore kaga jiraan la dagaalanka argagixisada.
Hillary Clinton oo Shaacisay inay u Taagan tahay Xilka Madaxnimo ee Waddanka Mareykanka
Sagal Radio Services • News Report • April 13, 2015
Hillary Rodham Clinton oo xoghaye arrimo dibadeed ka soo noqotay Mareykanaka ayaa ku dhawaaqday inay tahay musharraxad u taagan xilka madaxnimo ee Mareykanka sannadka 2016-ka.